ईपिएलले पायो ठुलो स्पोन्सर, धोनीको ब्राण्डले ग’र्‍यो करोडौँको सम्झौता ! – Yuwa Aawaj
फागुण २६, २०७७ बुधबार 469
काठमाडौँ : आगामी असोजमा हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) टी-२० क्रिकेट प्रतियोगितालाई भारतीय ब्रान्ड ‘सेभेन’ ले सह-प्रायोजन गर्ने भएको छ। गत वर्ष कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको इपिएल आगामी असोज ९ देखि २३ सम्म गर्ने तय छ।
सेभेन ‘फिटनेस र लाइफ-स्टाएल स्पोर्ट्सवेर’ ब्रान्ड हो। रीति ग्रुपअन्तर्गत रहेको ब्रान्ड २०१६ मा सुरु भएको थियो। ब्रान्डको सदभावना दूत भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनी हुन्। यो ब्रान्डको जुत्तामा धोनीको पनि लगानी छ।
सेभेन अब इपिएलको किट पार्टनरको रुपमा रहनेछ। सेभेन इपिएलमा भाग लिने सबै ६ टिमको पनि पार्टनर हुनेछ। इपिएलसँग सहकार्य गर्न पाउनु आफूहरुका लागि अवसर भएको रीति ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण पाण्डेले बताए।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा हुने इपिएलमा ६ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। जसमा काठमाडौं किङ्स इलेभेन, ललितपुर प्याट्रिओट्स, पोखरा राइनोज, चितवन टाइगर्स, भैरहवा ग्लाडियटर्स र विराटनगर वारियर्स छन्।
मेयर कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको पहिलो जित, सोमपालको ८० रन
विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो संस्करणको काठमाडौं मेयर कप एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ । टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा काठमाडौं मेयर–११ लाई ५ विकेटले पराजित गर्दै आर्मीले पहिलो जित निकालेको हो । काठमाडौंले दिएको १ सय ५६ रनको लक्ष्य आर्मीले २३ ओभर ५ बलमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो ।
आर्मीको जितमा सोमपाल कामीले ८० रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । सोमपाल प्लेयर अफ द म्याच बने । आर्मीका कुशल मल्लले २३ रन जोड्दा भिम सार्कीले १६ रन बनाए । कप्तान विनोद भण्डारीले अविजित २० रन जोड्दा राजेश पुलामी ८ रनमा अविजित रहे । काठमाडौंका सन्दीप लामिछाने र विपिन खत्रीले २–२ विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौंले ४२ ओभर १ बलमा अलआउट हुँदै १ सय ५५ रन बनाएको थियो । काठमाडौंका लागि सौरभ खनालले सर्वाधिक ४२ रन बनाए । सन्दीप रजालीले ३७ रन जोड्दा खडक बोहराले १९ रनमा आउट भए । आर्मीका शाहब आलमले ४ विकेट लिए । जितसँगै आर्मीले २ खेलमा २ अंक जोडेको छ ।
Prevश्रमिक पठाउन कतारसँग जीटुजी सम्झौता भए कडा प्रतिकारमा उत्रने चे’तावनी !
Nextओलि झनै शक्तिशाली !
फेरि एका एक चर्चामा किन आए संचारकर्मी रबि लामिछाने ?(भिडियो सहित)